Mashi 2022: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kwe-Free Software | Kusuka kuLinux
Mashi 2022: Okuhle, okubi nokuthakaselayo kweSoftware yamahhala
Ukufaka kwe-Linux Post | | Izaziso
Kule nyanga yesithathu onyakeni kanye nosuku lokugcina lwe «Mashi 2022», njengenjwayelo njalo ekupheleni kwenyanga ngayinye, sikulethela lokhu okuncane ukuhlanganiswa, kokunye kakhulu izincwadi ezifakiwe yaleso sikhathi.
Ukuze bakwazi ukubuyekeza (bona, funda futhi wabelane) kokunye okuhle kakhulu nokufanele kakhulu imininingwane, izindaba, okokufundisa, amabhukwana, imihlahlandlela nokukhishwa, kusuka kuwebhusayithi yethu. Futhi kusuka kweminye imithombo ethembekile, njengewebhu I-DistroWatch, lo Isoftware yamahhala (FSF), lo I-Open Source Initiative (OSI) futhi i I-Linux Foundation (LF).
Ngalokhu ukuhlanganiswa kwanyanga zonke, siyethemba njengenjwayelo, bangagcina kalula usesikhathini emkhakheni we Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux, nezinye izindawo ezihlobene ne- izindaba zobuchwepheshe.
1 Mashi 2022 Isifinyezo
1.1 Ngaphakathi kusuka kuLinux ngoMashi 2022
1.1.4 Okuphezulu okungu-10: Okuthunyelwe Okunconyiwe
1.2 Iphuma kuLinux ngoMashi 2022
1.2.1 Ukukhishwa kwe-GNU/Linux Distro Ngokusho kwe-DistroWatch
1.2.2 Izindaba Zakamuva ezivela kuFree Software Foundation (FSF / FSFE)
1.2.4 Izindaba Zakamuva ezivela ku-Linux Foundation Organisation (FL)
Isifinyezo se- March 2022
Ngaphakathi kusuka kuLinux ku March 2022
Amabhodlela 2022.2.28-trento-2: Inguqulo entsha iyatholakala - Mashi 2022
I-AV Linux MX Edition: I-GNU/Linux ekahle yabadali bokuqukethwe
I-MX-Linux Raspberry Pi Respin "Ragout2": Inguqulo Yokugcina Ikhishiwe!
Abaduni basongela u-Nvidia ngedatha ebucayi evuzayo uma bengazibophezeli ekushayeleni imithombo evulekile
Bathole ubungozi ku-cgroups v1 okuvumela ukuphuma esitsheni esisodwa
Ipayipi Elingcolile, obunye bobungozi obukhulu kakhulu eminyakeni eLinux
I-Hyperbola 0.4 isivele ikhululiwe futhi isivele isendleleni eya ekufudukeni kwe-OpenBSD
Ukwenza ngokwezifiso i-Linux: Nikeza i-GNU/Linux yakho ukubukeka nokuzwakala kweWindows!
I-Twister OS ne-Twister UI: I-Distro ye-Raspberry Pi kanye Netimu Ebonakalayo Ethuthukisiwe
Okuphezulu okungu-10: Okuthunyelwe Okunconyiwe
De todito linuxero Mar-22: Uhlolojikelele olunolwazi lwenkambu ye-GNU/Linux: Ushicilelo lokuhlola ukuthi izindaba ze-Linux ezifundisayo zenyanga yamanje ziqala kanjani. (Bheka)
I-Red Hat ilindele ukuthi ukusetshenziswa kwebhizinisi kwesofthiwe yobunikazi kwehle: Ngivuna Umthombo Ovulekile, okungukuthi, umphakathi womthombo ovulekile. (Bheka)
Izengezo ezihamba phambili eziyi-10 zokufinyelela iFirefox esezingeni eliphezulu nevikelekile: Inani eliphezulu lezengezo noma izandiso (ama-plugin) ukuze kuzuzwe iSiphequluli Sewebhu esisheshayo, esiguquguqukayo, esikhiqiza kakhulu. (Bheka)
I-Kali Linux 2022.1 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo: Okuhlanganisa isibuyekezo sethuluzi le-NetHunter 2022.1, nezinye izinguquko, ukuthuthukiswa, nezibuyekezo zokusabalalisa okuyisisekelo. (Bheka)
Bethule uhlelo lokukhulisa ukuhambisana phakathi kweziphequluli zewebhu: Kubonakala sengathi "ziyashintsha", futhi abanikazi beziphequluli zewebhu bahlanganyela ebhizinisini labo elivamile. (Bheka)
I-PolyCoder, ikhodi yomthombo ovulekile ekhiqiza i-AI engase idlule i-Codex: Ijeneretha yekhodi entsha epholile esekelwe kumodeli yolimi ye-OpenAI ye-GPT-2. (Bheka)
I-Mold 1.1 isivele ikhishiwe: Yini entsha ku-Linker yesimanje ephakeme kunegolide le-GNU ne-LLVM, engasetshenziswa njengokumiselela okubonakala ngokushesha kwesixhumi se-GNU kumasistimu e-Linux. (Bheka)
Isiqalisi SeMidlalo Yamaqhawe: Isiqalisi Somdabu se-Epic Games nemidlalo ye-GOG: Isiqalisi somdabu se-Epic Games nemidlalo ye-GOG, ephinde ibe yinkundla ephambanayo nomthombo ovulekile. (Bheka)
I-OTPClient: I-TOTP yamahhala kanye nomphathi wethokheni ye-HOTP enombhalo oyimfihlo owakhelwe ngaphakathi: Uhlelo lokusebenza lwe-GTK+ lokuphatha amathokheni e-TOTP/HOTP anombhalo oyimfihlo owakhelwe ngaphakathi ukuze uphathe ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili. (Bheka)
I-Flatseal: Isisetshenziswa sokuhlola nokuguqula izimvume ze-Flatpak Apps: Uhlelo lokusebenza lokuphatha izimvume zohlelo lokusebenza lwe-Flatpak ngendlela ecacile, kalula futhi ngokushesha ku-GNU/Linux. (Bheka)
Ngaphandle kwe-Linux March 2022
Ukukhishwa kwe-GNU/Linux Distro Ngokusho kwe-DistroWatch
IPorteus Kiosk 5.4.0: Usuku lwama-28
Upholi 5.0: Usuku lwama-27
I-4MLinux 39.0: Usuku lwama-26
I-Linux Mint 5 "LMDE": Usuku lwama-20
I-Lakka 4.0: Usuku lwama-18
I-FreeBSD 13.1-BETA2: Usuku lwama-18
I-IPFire 2.27 Core 164: Usuku lwama-10
I-Zorin OS 16.1: Usuku lwama-10
I-LibreELEC 10.0.2: Usuku lwama-10
ISparkyLinux 2022.03: Usuku lwama-08
OpenSUSE 15.4 Beta: Usuku lwama-02
I-Linux Kusuka ku-Scratch 11.1: Usuku lwama-01
I-EuroLinux 9.0 Beta: Usuku lwama-01
I-Hyperbola GNU/Linux-libre 0.4: Usuku lwama-01
Ukuze uthole okwengeziwe ngalokhu kukhishwa nokunye, chofoza okulandelayo isixhumanisi.
Izindaba Zakamuva ezivela kuFree Software Foundation (FSF / FSFE)
I-Day One Reflections ye-LibrePlanet: "Inkululeko Ephilayo": Namuhla, Mashi 19, bekungokokuqala kwezinsuku ezimbili zemicimbi nezingxoxo zengqungquthela yaminyaka yonke yeFree Software Foundation's (FSF), i-LibrePlanet. Indikimba yalonyaka ithi ‘Living Liberation’, kanti izinkulumo nemisebenzi igxile ekutheni ungaphila kanjani impilo ekhululekile emhlabeni wanamuhla. (Bheka)
Ukuze ufunde kabanzi ngalokhu nezinye izindaba ezivela ngesikhathi esifanayo, chofoza izixhumanisi ezilandelayo: FSF y FSFE.
Umthombo ovulekile 'we-protestware' ulimaza umthombo ovulekile: Kuleli sonto kuyinyanga eyodwa kwaqala impi kaPutin ne-Ukraine. Sithe isikhundla se-OSI ngaleso sikhathi: I-OSI igxeka ukuhlaselwa kwe-Ukraine ngamasosha aseRussia ngaphansi kokuqondisa kuka-Vladimir Putin, kodwa kunentuthuko entsha ethinta ngokuqondile umphakathi womthombo ovulekile futhi ifuna ukuphawula okwengeziwe. (Bheka)
Ukuthola kabanzi ngalokhu nezinye izindaba ezivela esikhathini esifanayo, chofoza kokulandelayo isixhumanisi.
Izindaba Zakamuva ezivela ku-Linux Foundation Organisation (FL)
I-Linux Foundation kanye ne-Harvard Laboratory for the Science of Innovation zishicilela ukubalwa kwabantu kwemitapo yolwazi esetshenziswa kakhulu yomthombo ovulekile.: I-Linux Foundation namuhla imemezele ukukhishwa kokugcina “kwe-Census II Yesoftware Yamahhala Nengumthombo Ovulekile - Imitapo Yohlelo Lokusebenza”. Lolu cwaningo lubika ukuthi yimaphi amaphakheji omthombo ovulekile, izingxenye, namaphrojekthi aqinisekisa ukusebenza okusebenzayo nosekelo lokuvikela. (Bheka)
Ukuthola kabanzi ngalokhu nezinye izindaba ezivela esikhathini esifanayo, chofoza kokulandelayo izixhumanisi: Blog, Izindaba zeProjekthi y Ukukhishwa kwabezindaba.
Ngamafuphi, siyethemba lokhu "encane futhi ewusizo ukuhlanganiswa kwezindaba " ngamaphuzu avelele ngaphakathi nangaphandle kwebhulogi «DesdeLinux» kulenyanga yesibili yonyaka, «marzo 2022», ube wusizo kakhulu kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekuthuthukisweni, ekukhuleni nasekusakazweni kohlelo lokuphilayo lwezinhlelo zokusebenza ezitholakalayo «GNU/Linux».
Futhi uma ukuthandile lokhu okuthunyelwe, ungayeki ukuwabelana nabanye kumawebhusayithi wakho owathandayo, iziteshi, amaqembu noma imiphakathi yokuxhumana nomphakathi noma izinhlelo zokuthumela imiyalezo. Ekugcineni, vakashela ikhasi lethu lasekhaya en «KusukaLinux» ukuhlola ezinye izindaba, bese ujoyina isiteshi sethu esisemthethweni se- Yocingo kusuka ku-DesdeLinux.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Mashi 2022: Okuhle, okubi nokuthakaselayo kweSoftware yamahhala
I-Chrome 100 isivele ilapha futhi lezi izindaba zayo
Uhlobo olusha lweJava SE 18 selukhishiwe futhi lezi yizindaba zalo